Shina: Inona No Niafaràn’ireo Niharamboina Vokatry Ny Horohorontany Tao Sichuan? · Global Voices teny Malagasy
Shina: Inona No Niafaràn'ireo Niharamboina Vokatry Ny Horohorontany Tao Sichuan?
Voadika ny 11 Oktobra 2018 7:57 GMT
Iharan'ny ririnina mamirifiry ankehitriny ireo niharam-boina vokatry ny horohorontany tamin'ny 12 may 2008 tao Sichuan. Manam-pahefana iray eo an-toerana no milaza fa mety hahatratra -21°C ny maripàna farany ambany ao amin'ilay faritra tratry ny horohorontany. Ankehitriny , ny fanampiana an'ireo traboina hamakivaky ny ririnina henjana no mijanona ho asa iray maika sady sarotra.
Tamin'ny volana lasa, M. Zang Lu (臧璐, manampahaizana manokana manana ny lazany mikasika ny tontolo iainana, sy ireo mpiara-miasa aminy no nisahirana nitsidika ny vohitra iray fametrahana ireo boka tao amin'ny distrikan'i Miao, 40 kilometatra miala ny ivon'ny horohorontany. Rehefa nanontaniana azy ireo izay tena ilainy, tsotra fotsiny no navalin'ireo tambanivohitra: “bodofotsy!”
Saingy rehefa nahangona fitafiana nahafeno gony 4 ho an'ireo sisa velona tamin'ny horohorontany ireo mpianatra 15 avy ao amin'ny Kolejy teknika sy fianarana asa ao Yibin, dia nolavin'ny biraon'ny Croix-Rouge ao an-toerana ny handray izany.
Tamin'io fotoana io ihany, nandefa hafatra ireo mpanabe tao amin'ireo faritra be tendrombohitra ao amin'ny faritanin'i Sichuan mba hilaza fa tsy ampy fitafiana, bodofotsy, fitaovam-pianarana, sy ny sisa izy ireo,
Inona ary no tena zava-misy ao amin'ilay faritra tratry ny horohorontany? M. Ji Shaokang, mpampianatra iray teratany Kanadiana, no nitsidika an'i Sichuan tamin'ny desambra lasa teo. Soritsoritany ao anatin'ny blaoginy izay hitany :
Ao anatin'ny ririnina mamirifiry, tsy dia ampy fitafiana sy bodofotsy loatra ireo tambanivohitra nihaona taminay tany an-tendrombohitra. Teo am-pahitana anay, nanatona anay izy ireo mba hitaraina, an-dranomaso.
Ao anatin'ireo tanàna sy ireo tanàna mivangongo, ahitàna an'ireto teny filamatra ireot eny amoron-dalana:
“Raha mbola velona foana izahay ary mbola manana tanana sy tongotra, afaka ny hivoaka velona amin'ireo loza voajanahary rehetra.” Ndao hamboarintsika irery ny tranontsika: tsy hiandry fanampiana isika.” “Andao holoarantsika ireo vatankazo any anatin'ireo faharavàna ary haorintsika irery ny tranontsika vaovao.”
Talanjona ny iray tamin'ireo naman'i profesora Ji : “Lasa aiza daholo ny fanampiana nomentsika?”
Ankoatra izay, marobe ireo olona ivelan'ny faritra tratry ny horohorontany no nanandrana nanampy ireo mpiray tanindrazana aminy ao Sichuan.
Herinandro mialoha ny Taona Vaovao, nandefa iraka faharoa tao Sichuan ny Campagne Care for Life （关爱生命万里行). Nampiditra olona 43 ilay Fikambanana tsy miankina (izay ny 29 tao hong Kong) mba ho any Sichuan. Mitondra an'ireo fanomezana marobe sy ny fony feno fitiavany, niara-nifety ny Taombaovao niaraka tamin'ireo namany taloha izy ireo tao Sichuan. Milaza ny vohikan'izy ireo hoe:
Amin'ny maha-fikambanana tsy miankina vaovao anay, fantatray fa voafetra ihany izay azonay atao. Tsy vitanay ny hanampy ireo traboina an-tapitrisa any. Saingy mino izahay fa tsara kokoa ny manampy noho ny hoe mivonona fotsiny, tsara kokoa ny mihetsika androany, toy izay hiandry rahampitso.
Ny volana novambra 2008, namoaka taratasy misokatra iray ny Green and Shine Foundation （桂馨基金会）mba ho ho fanampiana an'ireo mpanabe ao ambanivohitr'ilay faritra tratry ny horohorontany, izay namporisika hoe:
Avy amina faritra samihafa avokoa izahay… ary ny tsirairay avy aminay dia manana asa hafa…. kanefa, iraisanay ny fananana fitiavana, ny dikan'ny fandraisana andraikitra ary ny fonay, izay nitarika anay hanao hetsika.
Vokatr'izany dia namaly ny antso, miaraka amin'ny fihetseham-po goavana ireo olona avy amina sokajy maro manerana an'i Shina, nandefa fanomezana, fitafiana, boky, fitaovam-pianarana, sy ny sisa… ho any amin'ireo mpanabe any an-toerana.
Ramatoa Wu Bei（吴蓓, mpanabe sy mpandikateny, miaraka amin'ny nàmany Ramatoa Liu Zhen（刘真), vadin'ilay mpandinika malaza Yin Zhishen, maty tamin'ny taona 2009, no nandefa SMS ny vaovao ho an'ireo nàmany, ary nahazo valiny mahafapo marobe.
Indrisy, raha mba nanandrana hijery an'ireo loharanom-baovao anaty tambajotra, tsapan'ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity fa efa nofafàn'ireo webmestres-n'ny vohikala izy ireny, angamba satria ireo lahatsoratra ireo maneho hevitra fa tsy mandray fepetra mahomby ny mpitondra mba hikarakaràna an'ireo sisa velona tamin'ilayhorohorontany.